सेक्स गरेपछि मूड अफ हुन्छ? नआत्तिनुस् अब यस्ता उपाय अपनाउनुस् - Everest Dainik - News from Nepal
सेक्स गरेपछि मूड अफ हुन्छ? नआत्तिनुस् अब यस्ता उपाय अपनाउनुस्
काठमाडौंः सेक्स गरिरहेका बेला एक अर्कालाई भरपूर सन्तुष्टि दिन महिला र पुरुष दुबैले धेरै मेहनत गरिरहेको हुनसक्छ । सेक्सका दौरान अपनाइको तरिकाले सन्तुष्टि पनि देला तर सेक्स गरे लगत्तै तपाईंको पार्टनर पढ्न बस्नुभयो भने तपाईंलाई कस्तो महसुस होला ?
हो, सेक्सपछि गरिने यस्तै गल्तीहरु जुन तपाईंले गल्ती गरेको महसुस नगरेपनि यसले तपाईंको पूरै सेक्स लाइफलाई नै बरबाद गर्न सक्छ । सेक्सका बेला जतिसुकै रमाइलो गरेपनि, सेक्स पछि गरिने एउटा सानो गल्तीले सबै रमाइलो चकनाचुर पार्न सक्छ ।सेक्सपछि गरिने गल्तीहरु यहाँ उल्लेख गरिएका छन् जसलाई तपाईंहरुले जान्न निकै जरुरी छ ।
धेरैजसो जोडीहरु यी समस्याहरुबाट ग्रसित छन् । सेक्सपछि धेरै जोडिहरुको पार्टनर निदाइहाल्ने बानी हुन्छ जसले गर्दा सेक्सको मुड नै खराब हुन्छ । सुतिहाल्ने बानीले गर्दा सेक्स गर्दा अपनाइएका तरिकाहरुलाई तपाईंले एक अर्कासँग साट्न पाउनुहुँदैन र सेक्सपछिको मुडलाई बुझ्न सक्नुहुनेछैन ।
याे पनि पढ्नुस संभोग अघि महिलाले यी कुराहरु गर्छन, रोचक तथ्य थाहा पाए छक्क पर्नुहुन्छ तपाई !
सफा गर्नको लागि बाटो तताउनुः
सेक्स गनुपूर्वसँगै नुहाउनु निकै लाभदायक मानिन्छ तर सेक्सपछि हतार हतार वासरुमतिर लाग्नु गलत हुन्छ । सेक्स गरिरहेका बेला जोडिहरु केहि खराब भएको पनि मतलब गर्दैनन् तर सकिनेबित्तिकै त्यो सफा गर्नका लागि वासरुमतिर गइहाल्छन् यो एक तरिकाले ठिकै हो तर तपाईंको पार्टनर त्यसपछि पनि सेक्स मुडमा नै हुनसक्ने भएर त्यसलाई लम्ब्याउने चाहना हुनसक्छ । सफा गर्नको लागि बाटो तताइहाल्नाले तपाईंको पार्टनरले सेक्सका दौरान केहि नराम्रो घटना भयो कि भन्ने सोच आउन सक्ने भएका कारण पार्टनरको सेक्स मुड खराब हुनसक्छ ।
याे पनि पढ्नुस विवाहअघि सेक्स गर्नु भा’छ भनेर सोधेपछि युवतीहरु....
साथीलाई फोन गर्नुः
धेरैजसो जोडीहरुले गर्ने यो अर्को साधारण गल्ती हो । यो साँचो हो कि सेक्स गरिरहेका बेला कोहि पनि आफ्नो फोन उठाउन र कामको कुरा गर्न इच्छुक रहँदैनन् त्यसकारण यस्तो गफका लागि किन बिहानसम्म नकुर्ने त ?
सेक्सलाई अनुभव गर्ने बेलामा आफ्नो कान र आँखालाई मोबाइलमा केन्द्रित गर्ने हो भने तपाईंको पार्टनरले तपाईं यसमा इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने सोच्नु हुनेछ जसले सेक्स मुड खराब गर्नसक्छ ।
काममा अथवा पढ्नमा लाग्नुः
सेक्सका दौरान जोडीले के सोचिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि यकिन भन्न गाह्रै छ । यदि कसैले सेक्सपछि पढ्नका लागि तरखर गर्छ भने त्यो नै उत्तर हुनसक्छ । आफ्नो पार्टनरलाई एक्लै छोडेर आफू पढ्न अथवा बाँकि भएको काम सिद्धाउनतिर लाग्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको सेक्स लाइफमा नकारात्मक असर पुर्याउँदछ ।
याे पनि पढ्नुस श्रीमतीलाई उत्तेजना कम हुन्छ मलाई बढी, के गर्ने हाेला ?
बच्चाबच्चीलाई सँगै सुताउनुः
कसैलाई पनि आफ्नो गोपनियतामा खलल पुर्याएको मन पर्दैन चाहे त्यो ठूलो मानिसले होस् वा सानो बच्चाले नै । धेरै आमाहरुको आफ्नो बच्चाहरुलाई एउटै बेडमा सुताउने बानी हुन्छ जसले तपाईंको पार्टनरलाई रिस उठाउन सक्छ, जसले तपाईंको लागि सेक्सपछि पनि केहि नयाँ कुराहरु गरौँ भन्ने सोचिरहेको हुनसक्छ ।